Mbupu gbọala Site EU na UK | Importgbọ M Mbubata
Imirikiti ụgbọ ala anyị debara aha na Europe ka ndị nwe ha na-ebuga na UK ma ha adịlarị ebe a, naanị na-achọ nhazi ndebanye mbubata na DVLA. Anyị nwere ike ijikwa usoro niile ị ga-esi nweta ụgbọ ala gị site na mba EU ọ bụla nọ na UK.
Anyị na-akwọkarị ụgbọ ala n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ ụgbọ ala zuru ezu, ma na-enyekwa mpịakọta ọrụ mbupu ụgbọ mmiri site na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ.
Ntuziaka ụtụ isi maka mbubata
Mgbe ịbubata ụgbọ ala sitere na Europe na UK, ịnwere ike ịme ya kpamkpam na-akwụghị ụtụ isi na-enye ụgbọ ala ahụ karịrị ọnwa isii wee kpuchie 6km site na nke ọhụrụ.
Mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala ọhụrụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọhụrụ, a ga-akwụ ụgwọ VAT na UK yabụ biko egbula oge ịgba ajụjụ ọ bụla gafere anyị maka ịtụ ụtụ isi ụtụ gị tupu ịzụta.
Registrationdị ndebanye ndebanye na Ndozi
Ugbo ala n'okpuru afọ 10
Anyị na-ejikwa usoro niile maka nnọchite gị, ma nke ahụ na-emekọ otu mmekorita nke ndị nrụpụta ụgbọ gị ma ọ bụ Ngalaba maka Transportgbọ njem, n'ihi ya ị nwere ike izuike na ịmara na a ga-edebanye aha gị na DVLA n'ụzọ iwu kwadoro n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Carsgbọ ala ndị aka ekpe si Europe ga-achọ mgbanwe ụfọdụ, gụnyere ndị nke ụkpụrụ ọkụ ihu iji zere ịcha ọkụ maka ọbịbịa na-abịanụ, ọsọ ahụ iji gosipụta kilomita elekere kwa elekere na ọkụ foogu azụ ma ọ bụrụ na ọ kwadobeghị nke ụwa niile.
Anyị wuru ọtụtụ katalọgụ nke ihe na ụdị ụgbọ anyị bubatara wee nwee ike ịnye gị ọnụego ngwa ngwa nke ụgbọ ala gị ga-achọ.
Ugbo ala karịrị 10 afọ Old & Classic Cars
N'ime ụgbọala 10 na ndị ochie bụ ụdị nnabata akwadoro, mana ka na-achọ nyocha MOT na ụfọdụ mgbanwe tupu ịdebanye aha. Mgbanwe ndị ahụ dabere na afọ mana ọ na-abụkarị ọkụ ihu na ọkụ na-acha ọkụ azụ.
Nọmba Nọmba UK & Ndebanye aha DVLA
Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịkwado efere nọmba UK ọhụrụ gị ma nwee ụgbọ ahụ dị njikere maka mkpokọta ma ọ bụ nyefe ya na ọnọdụ ị họọrọ.